လှူ တတ်ပါစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လှူ တတ်ပါစေ
Posted by ဆူး on Nov 19, 2010 in My Dear Diary | 20 comments
ဆူး စိတ်ကူး လှူ တတ်ပါစေ
ယခု အချိန်အခါ ကထိန်ချိန်ခါ ဖြစ်တဲ့ အတွက်..
မြန်မာလူမျိုးတွေ အလှူရေစက် လက်နဲ့ မကွာ လှူကြတဲ့ အချိန်အခါ ဖြစ်ကြပါပြီ။ လမ်းသွားရင် လက်ထဲက ပါတဲ့ ကြွေ လေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.. အိတ်ထဲက ပါတဲ့ အတန်ကြီးဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.. ထည့်ဝင် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုကြတယ်။ လူတွေက လှူသာ လှူတယ် အလှူရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သိပ်မစဉ်းစားဘူး.. အသုံးတည့်သလား မတည့်ဘူးလားလည်း မသိဘူး.. လှူလိုက်တာဘဲ.. ကထိန်ဆိုတာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းအတွက် လှူတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘုန်းကြီး အသုံးအဆောင်နဲ့ အိုးခွက် တွေ လှူဒါန်းခြင်းက ကောင်းသည်ဟု ယူဆသော်လည်း တချို့သော လူများ ထီးဖြူ ရွှေထီး မြသပိတ် စသဖြင့်.. လှူကြတယ်။ ရွှေထီး လှူရင်တော့ ငါ ရွှေထီး ဆောင်းရချည်ရဲ့.. ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ အသုံးတည့်မတည့် မစဉ်းစားဘူး.. နောက် ထီးဖြူ.. ငါထီးဖြူ ဆောင်းရချည်ရဲ့ မြသပိတ်.. လှူကြတာ.. အမှန်တကယ် လိုအပ်ပြီး အသုံးတည့်မဲ့ ပစ္စည်းတွေ အပေါ် ပိုပြီး အသုံးစရိတ်သုံးမယ် ဆိုရင် တခြား အသုံး ဆောင်နဲ့ လိုအပ်တာ ပိုရတာမယ်လို့ ထင်တယ်။ လှူပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာဘဲလေ.. ဘုန်းကြီးက ရွှေထီးလည်း မဆောင်းဘူး လူတွေ ၀ယ်ပြီး လှူတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေရာ တနေရာစာ အပိုကုန်သွားတာဘဲ ရှိတယ်။ ထီးဖြူဆိုတာလည်း.. လိုအပ်တဲ့ စာရင်းမှာ မပါဘူး။ မြသပိတ် ဆိုတာလည်း အမှန်တော့ ကထိန် တခု အတွက် မြသပိတ် တလုံးလောက် ရှိနေပြီ (မြသပိတ်လေး ကိုင်ပြီး အလှူခံရန် အတွက်) ဆို.. နောက်ထပ် မလိုအပ်တော့တဲ့ အရာလို့ ထင်တယ်။ ကထိန် တခုခု လှည့်ပြီ ဆို သတိထားကြည့်လိုက်ရင် ပဒေသာပင် တခုမှာ တင် ရွှေထီးတွေ ၃ ၄ ၅ လက်လောက်ကို ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပဒေသာပင်တွေ ၅ပင်လောက်ဆို.. စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ ထီးဖြူတွေလည်း ဒီလိုဘဲ.. မြသပိတ်တွေ ဆိုလည်း သြတိုက်နေတာဘဲ.. မြသပိတ် လှူမဲ့ အစား.. ရဟန်း တပါး အသုံးပြုတဲ့ သပိတ်တလုံး လှူလိုက်တာမှ.. အမှန်တကယ် အသုံးတည့်တဲ့ အရာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အသုံးတဲ့သော ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပြီး ကုသိုလ် တရားများ ပွားများနိုင်ပါစေ။
ထို့ကဲ့သို့ အသုံးမတည့်တာတွေ လှူနေကြတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက် တချို့ကတော့.. ပြန်ထုတ်ရောင်းရတဲ့ အထိ ဖြစ်လာတာပေါ့.. အမှန်တော့.. အစောကြီး ကတည်းက အသုံးတည့်တာ လှူလိုက်ရင် ပြန်ထုတ်စရာ မလိုဘူး။ ပြန်ထုတ်တယ် ဆိုမှတော့.. ၀ယ်လှူတဲ့ လူက ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) လောက်နဲ့ လှူထားပေမဲ့ ပြန်ရောင်းရင် ဘာမှ မရဘူး.. လောက မှာ အသုံး မတည့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ လည်နေကြတာပေါ့။
ပြောသာ ပြောရတဲ့ ရွှေထီး ရောင်းတဲ့ လူ ထီးဖြူ ရောင်းတဲ့ လူ မြသပိတ် ရောင်းတဲ့ လူတွေ ရှိရင် စိတ်မဆိုးကြနဲ့နော်.. စီးပွားရေးကို နှောက်ယှက်တာ မဟုတ်ပါ။ ဗဟုသုတ နဲ့ အသိ တိုးပွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရေးထားပါသည်။
ဆူးပြောတာ မှန်ပါ၏ … ရုံးမှာဆို ရွှေထီးလှူချင်တဲ့သူတွေတန်းစီနေလို့ အရာရှိတွေပဲ လှူခွင့်ရတာ .. သူတို့က သူတို့နံမည်ကို ပဒေသာပင် ထိပ်ဆုံးမှာ ထားချင်ကြတာလေ …
ဘုရား ဆွမ်းတော် တင်တာ.. ထမင်းတုံးလေးကို သကြားဖြူးပြီး တင်တာနဲ့.. ကိုယ်ဟာကို ဆိုရင်တောင် ထမင်းနဲ့ ထညက် မစားကြဘဲနဲ့..
ဘယ်က စတဲ့ အယူလဲ မသိတော့ပါဘူး
သကြားကမှ အရသာရှိသေး .. ပေါက်ပေါက်ဆုတ်က ပိုဆိုးသေး .. အခုခေတ်မှာ ဂျင်းတက်ကိုလဲ ဘုရားကပ်တာပဲ … အသီးတွေအစိမ်းမှာ ဘုရားကပ် မှည့်ရင် စွန့်စား …
ဘုရားလမ်းညွန်ထားတဲ့ နည်းအတိုင်း လူတွေ ဥပုတ်စောင့် နေကြတာ.. ဥပုတ်စောင့်တယ် ဆိုရင်.. နေ့မွန်းတည့်ပြီးတာနဲ့ နေ့လွဲညစာ မစားရဘူး။ ဘုရားစင်မှာ အသီးအစိမ်းကြီးတွေ ဘုရားကပ်ထားတာ မစွန့်ဘဲ ထားလိုက်တာ မှဲ့ဝင်းနေမှ စွန့်စားတယ် ဆိုတော့.. တွေးကြည့်မိတာကတော့.. ဘုရားကပ်တာ မဟုတ်ဘဲ.. ဘုရားကို အသီး မှဲ့ တဲ့ အထိ စောင့်ကြည့်ထား ဖို့ အပ်ထားသလို ဖြစ်နေမလားဘဲနော်။
ဂျင်းကပ်တဲ့ လူက ယတြာလေ.. စကားပုံတောင် ရှိသေးတယ် *စိန်တတင်း ဂျင်းတတက်* အဲဒီ စကားပုံ အတိုင်း.. အောင်ချင်တာတွေ များတော့.. တော်၏ မတော်၏ မသိဘူး.. ဘုရားစင်ပေါ် ဗေဒင်ဆရာ အမိန့်ရှိတဲ့ အတိုင်းလုပ်တာဘဲ…
တချို့ဆို.. ဘုရားစင်မှာ ဂေါ်ဖီထုတ်ကြီးတွေ ထောပတ်သီးကြီးတွေ.. ဘုရားကြည့်တော့ ၆လက်မ လောက်ဘဲ ရှိတယ်.. ကပ်ထားတာ ဘုရားစင်တောင် ပြုတ်ကျမတတ်ဘဲ..
အဓိကတော့ ဥာဏ်ပါတဲ့ ကုသိုလ်တွေ လုပ်မှ.. ထူးခြားတဲ့ ကုသိုလ် အကျိုးပေးတွေ ဖြစ်လာမှာ.. တခြားတွေးမိတာလေးတွေ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့.. အသိချင်း ဖလှယ်တဲ့ သဘောပေါ့..
ဒီလိုအလဟဿမဖြစ်အောင် မြသပိတ်ရွှေထီးဝယ်ခွင့်ကို ပါမစ်အရင်လုပ်ခိုင်းပါ။
ဒါမှမဟုတ် မြို့တမြိုကို မြသပိတ်တစ်လုံး ရွှေထီးတစ်လက်သာ ၀ယ်ယူခွင့်ပေးပါ။
လေးပေါက်နော်.. ပြသနာ မရှာနဲ့.. အဲဒီ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံ ရှာနေတဲ့ လူတွေ အရင်ဆုံး ထပြီး ပြသနာ လာရှာလိမ့်မယ်။ အဓိက ဆူး ရေးတာ အတွေးအခေါ်ပိုင်းနဲ့ သင့်မသင့် ဆိုတာလေး တွေးမိအောင် ရေးတာ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာလေးလဲရှိပါတယ် တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲဆိုက်ကားဂိတ်တွေလဲအရမ်းအလုပ်များတယ်နော်ဟဲဟဲ……….
My name is Yu Yu Thwel.I was born in Yangon since 1983.Now I live in Yangon asaShwe Pyi Thar Township. says:
ဆူးပြောတာမှန်ပါတယ်၊ လူတွေက အဓိကနဲ့ သာမညကို မခွဲခြားကြဘူး၊ ဘုန်းကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ ယုဖတ်၇တာရှိသေးတယ်၊ ကထိန်သင်္ကန်းဆိုပြီးသင်္ကန်းဖြစ်ရင်ပြီးရော လူတွေက ၀ယ်ပြီးကပ်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် သင်္ကန်းက ရဟန်းဝတ်တဲ့ သင်္ကန်းအမည်ခံပေမယ့် ကျောင်းရောက်တော့ ကိုရင်လေးပဲ ၀တ်လို့ ရတဲ့ သင်္ကန်းတွေ တိုက်ဆွေးသင်္ကန်းတွေ အများကြီးပဲ ဖြစ်နေတယ်တဲ့ ၀ယ်တဲ့သူက မသိလို့ ၀ယ်၊ ရောင်းတဲ့သူက သိရက်နဲ့ ရောင်းနေကြတော့……….
မယု ပြောတဲ့ အကြောင်းတွေလည်း အများကြီး ကြားသိခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဆိုရင် အလှူခံရတာ သင်္ကန်းတွေက ရာနဲ့ ချီပြီးတော့ သာရတယ်.. တကယ်ဝတ်ရုံလို့ရတာ ၁၀ ဂဏန်းတောင် မရှိဘူး။.. အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိတယ်။
နောက်ပြီး ကထိန် သင်္ကန်း ဆိုရင် သင်္ကန်း ၃စုံ တိစိဝရိတ် မှ ကထိန် ခင်းလို့ရတယ်လို့ လူတွေက ယူဆကြတယ်။ အမှန်တော့ တကယ် လှူနိုင်တဲ့ လူဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး စုံစုံ လင်လင် ပါအောင် လှူသင့်တာပေါ့.. လပြည့်နေ့ အထိ ကထိန်ခင်းမဲ့ ဒကာ မရှိဘူးဆိုရင်.. ဒကာကလည်း မတတ်နိင်ဘူးဆိုရင် ဒုကုဋ် ဧကသီ သင်းပိုင် သင်္ကန်း ၃ထည် မဟုတ်လည်း ဒုကုဋ် တထည်တည်းသော် လည်းကောင်း ဧကသီ တထည်တည်းသော် လည်းကောင်း သင်းပိုင် တထည်တည်းသော် လည်းကောင်း နှင့် ကထိန်ခင်းပြီး ကထိန် အလှူဒကာ ခံယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်.. ထိုသင်္ကန်း သည် ၅ခန်း အနည်းဆုံး ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး ဓါးခွဲ ဖြစ်ရန်တော့ လိုအပ်သည်။ ဓါးခွဲ သင်္ကန်း ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ရင်တော့ သင်္ကန်း ချုပ်ထားတဲ့ အပ်ချည်ကို ဖြုတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးများကတော့ ကြည့်တာနဲ့ သိပါတယ်။
မနက်ဖြန် လပြည့်နေ့ ဖြစ်တဲ့ အတွက်.. ကထိန် အလှူဒကာ မပေါ်သေးတဲ့ ကျောင်းများ.. သဒ္ဒါပေါက်ပြီး လှူဒါန်းမဲ့ သူတွေ ရှိကြပါစေ။ ကောင်းကျိုးမျှော်လို့.. နိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်.. သင်္ကန်း ဓါးခွဲမဟုတ်လျှင် ကထိန် ခင်းသော်လည်း ကထိန် အာနိသင် ခံစားရမည် မဟုတ်ပါ။
အန်တီဆူးပြောတာ ဟုတ်တယ်။ လူတွေက စွတ်လှူပြီး တကယ်ရတဲ့သူတွေမှာ အကျိုးမများရင် လှူတဲ့လူတွေလည်း နောင်ဘဝ ပြန်စံစားရတော့ မလိုပဲ ပိုနေတဲ့ စည်းစိမ်တွေပဲရမယ်ဆိုတာ ပညာပေးသင့်တယ်။ အန်တီဆူးသာ သူတို့ကို ပညာပေးဖို့ သီလရှင်ဝတ်မယ်ဆိုရင် ကိုကြောင်ကြီး ပစ္စည်းငါးပါး ထောက်ပံ့ပါ့မယ်။
ဦးလေးကြောင်ကြီးရေ.. ဆူးကို အဲလို ပြောလွန်းလို့ ဘုန်းကြီးတွေကလည်း ညဉ်းသီလရှင် ၀တ်ပါလားလို့ ပြောကြသလို လူတွေလည်း တော်တော် ပြောကြတယ်။
ဆူးကလည်း ခေါင်းမာသူပီပီ.. ကိုယ်ပိုင် အတွေးနဲ့ ကိုက်ညီမှ လက်ခံတတ်တဲ့ လူဖြစ်လေတော့ သီလရှင် ကိုတော့ ဒီဘ၀မှာ လုံးဝ ၀တ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
*သီလရှင် ၀တ်ခြင်းသည် ကုန်းဘောင်ခေတ်မှ စတင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု တွေ့မိသည်။
*သီလရှင်သည် သီလ ၈ပါးနှင့် ကတုံးတုံးထားတာက လွဲလို့ လူနှင့်မခြားဟု ယုံကြည်သည်။
*ဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းမ (ဘက္ခူနီ) ပြတ်သုန်းသွားသည့် ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
*တောက်ပသည့် အရောင်သည် လူ၏ စိတ်ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေသည့် အပြင် စိတ်ကို ထွေပြားပြီး အရောင်အမျိုးမျိုး ဖြစ်စေတယ်လို့ ယူဆပါသည်။
*၀တ်ချင်းဝတ် ယောဂီဘဲ ၀တ်မယ်။
သီလရှင်ဝတ်တာ မ၀တ်တာကတော့ မဆူးရဲ.ကိုယ်ပိုင်အတွေးပေါ့လေ။
အာဖျံကွီးကို ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးက သီလရှင်ဝတ်ပါလားလို.မေးတုန်းက “တပည့်တော်မမှာ သာသနာဘောင်အတွင်းကလူဖြစ်ဖို. မြင့်မြတ်တဲ့ ပါရမီမပါလာတော့ သီလရှင်ဝတ်ချင်စိတ်မရှိပါဘူးဘုရား။ လူ.ဘောင်ထဲကပဲ စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ. အရှင်ဘုရားတို.လိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို ဖြည့်ဆည်းလှုဒန်းနိင်ဖို. ကြိုးစားပါတော့မရ်ဘုရား” လို.ဖြေဘူးတရ်။
ဘိက္ခူနီကတော့ ဘုရားခေတ်ကတည်းက မယ်တော်ဂေါတမီရဲ.တောင်းဆိုချက်အရဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ (ယောက်ျားတွေပဲ မြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းဖြစ်နိင်သလား၊ မိန်းမတွေကောမဖြစ်နိင်ဘူးလား ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်အရ) နောက်ပိုင်း ဘိက္ခူနီခေတ်ပျက်သုန်းသွားတော့ သီလရှင်ခေတ်ပေါ့။ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဆံပင်ဆိုတာက အရမ်းတန်ဘိုးထားစရာတစ်ခုပေါ့။ ဆံပင်စွန်.လွှတ်ပီး လူ.ဘောင်ကိုစွန်.တဲ့ သီလရှင်ဆရာလေးတွေက လေးစားစရာပဲလေ။ ၈ ပါးသောသီလဆိုတာကလဲ အလွန်တရာစောင့်ထိမ်းနိင်ခဲတရ်။ (သောတာပန်ဖြစ်ပီးရင်တောင် ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို. မြဲမြံတာ ၅ ပါးသီလပဲရှိသေးတရ်)။ လူဆိုရင် သီလတစ်ပါးမချိုးမဖောက်ပဲ စောင့်ထိမ်းဖို.တောင် အနိင်နိင်။ အဲဒီမှာ တစ်ချက်သီလရှင် ဘ၀ကမြင့်မြတ်တရ်ဆိုတာထပ်သိနိင်တရ်။ ပီးတော့ သာသနာ့ဝန်ကို ပရိယတ္တိ၊ ပတိပတ္တိ နှစ်မျိုးလုံးနဲ. ထမ်းဆောင်နိင်တာ ဘုန်းဘုန်းတွေပီးရင် … သီလရှင်ဆရာလေးတွေပဲ။ (လူတွေလဲထမ်းဆောင်လို.ရပါတရ်။ ဒါပေမဲ့ သားကျွေးမှု၊ မယားကျွေးမှု တွေနဲ.ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လောကကြီးမှာမလွယ်လှဘူး)။ အဲဒီတော့ သီလရှင်ဆရာလေးများရဘ၀ဟာ မြင့်မြတ်ပီးရခဲလှပါတရ်။
မဆူးရဲ. လှုတတ်ပါစေပို.စ်ကို အရမ်းကြိုက်ပါတရ်။ အလှုအတန်းဆိုတာလဲ သာသနာပြုတာတစ်မျိုးပဲ။ အဲဒီမှာ မှားနေတဲ့ အမှားလေးကို ထောက်ပြထားတဲ့အတွက် လေးစားပါတရ်။ ပထမစလွဲတဲ့သူက မသိလို.။ ဒုတိယလိုက်မှားတဲ့သူက ရှေ.ကလူလုပ်သလို လိုက်လုပ်လို.၊ နောက်ထပ်မှားကြတာက လူအများလက်ခံကျင့်သုံးတာက အမှန်တရားအဖြစ်ဟန်ဆောင်တတ်လို.။ နောက်လဲများများ ပညာပေးနိင်ပါစေ … မဆူး။
ညနေပိုင်း ယောဂီ တစုံလာပို့ပါမည်။ တခုတော့ရှိသည်။ေ၇ာဂ မကစားရ။
သီလရှင်များသည် ကတုံးဆံပင်ကလွဲ၍ ရှစ်ပါးသီလရှင်များနဲ့ မကွဲဆိုတာမှာကိုက အမျိုးသမီးများ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဆံပင်ကို ပယ်စွန့်နိုင်တာမို့ ကြီးမားသော ပါရမီဖြည့်ခြင်း မည်ပါသည်။
ယောဂီ ၀တ်စုံ အပေါ် ဆူး အမြင်.. အရောင် အားဖြင့် အညိုရောင် (ရှားရောင်) (သစ်ခေါက်ဆိုးတဲ့ အရင့်ရောင်)
အရောင်က မှိုင်းနေတော့.. လှပသစ်လွင် တောက်ပြောင်မှု မရှိဘူး။ ထို့ကြောင့် အရောင် အပေါ် တပ်မက်ပြီး အလှ အပ ဆွဲဆောင်မှု အနေနဲ့ စိတ်မျိုး မထားမိဘူး။
ဥပမာ.. နီဝါပြာစိမ်း ထို အရောင်များသည် အရောင် တမျိုးစီပေါ်လိုက်ပြီး စိတ်၏ ဖြစ်တည်မှု အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည်။
မဝေကတော့ တရားအားထုတ်နေတဲ့ သီလရှင်တွေကို ယောဂီဝတ်ထက် ပိုပြီး ကြည်ညိုပါတယ် … အဆင်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ကြည်လင်တာကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် … မကြာခင်အချိန်တစ်ခုမှာ တစ်လလောက် သီလရှင်ဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ် … တစ်ယောက်စိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါ့ ..
ဪ~~ဆြာဆူးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ယူနီဖောင်းကာလာကို ရွေးနေတာပေါ့ မှတ်သားလောက်ပါတယ်ဗျာ
အဘနီ သဘောပေါက်တယ် ဆူးပြောတာ.. ကမ္မ၀ါမဖတ်တဲ့ အတွက်လည်းပါတယ်။
နောက်တခုက ကုန်းဘောင်နဲ့ အင်းဝကတော့ ဆူး အမှတ်မှားတာ ဖြစ်မှာပေါ့.. အမှန်တော့ စာဖတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး.. တီဗွီအစီအစဉ် တခုမှာ.. အမျိုးသမီးတယောက်က သူသီလရှင်ဝတ်ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ သီလရှင် ဘယ်တုန်းက ပေါ်တယ်ဆိုတာ ပြောသွားတာ မှတ်ထားတာ။ နားနဲ့ ကြားတာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ.. စာဖတ်ရတာ ပျင်းတဲ့ ၀ါသနာနဲ့တော့.. ဘယ်စာအုပ်မှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မဖတ်တတ်ဘူး။ နားနဲ့ ကြားတာ မှတ်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ဘဲ ရှိတယ်။